April 2012 – Eritreritra mandalo
Apr 23, 2012 terakasorotany
Esperanto? Mety efa nahenoheno ny fisian’ny teny esperanto ihany angamba ianareo… Ho an’izay tsy mbola naheno ny fiteny esperanto dia ity henoina, na ity vakio. Raha te hianatra ny zava-misy…
Apr 21, 2012 terakasorotany
Habetsahana sa hatsarana ? Misy ny sasany hilaza hoe aleo hatsarana toa izay habetsahana, ary misy ny sasany milaza «hatsarana ankabetsahana», ary ny sasany “habetsahana anie mandeha amin’ny fanangonambola ihany…
Nandritry ny dimampolo taona nahaleovantena, nikorontana foana i Madagasikara, isaky ny taompolo. Ireo korontana ireo dia nitondra fihemorana ara-toe-karena ary ara-piarahamonina. Rehefa miresaka mikasika io fihemorana io aho dia mikasika…
Amin’izao fotoana izao, tsy mbola misy ny Wikipedia amin’ny teny afrikanina izay manana isan-dahatsoratra mihoatra ny iray hetsy. Mety ny fanjakazakan’ny Wikipedia amin’ny fiteny eoropeana lehibe angamba, ary koa ny…
Apr 20, 2012 terakasorotany
At this time, no African language Wikipedia has passed the hundred thousandth article. This is certainly due to the domination of European language Wikipedias and the relevance of their articles…
First off, the language I am currently writing in is not my native language, so I am less fluent in that language than in my native tongue : Malagasy ;…